Burburinta Cannabis ee Illinois - Sida loo baabi'iyo xukunnada cannabis
Burburinta iyo Cannabis Illinois
Sharaxaada Cannabis ee Illinois iyo Sinnaanta Bulshada ayaa La Sharaxay
Sinnaanta Bulshada & Dareenka Xashiishka
Fasaxidda Cannabis ee Illinois waxay u socotaa dadka loo qabtay, ama lagu xukumay, dambi u qalma uumiinno marka loo eego Sharciga Cannabis ee cusub iyo Sharciga Canshuuraha oo dhaqan galaya Illinois Janaayo 1, 2020. Aasaaska heerka hoose ee xashiishadda cannabis (haysashada ilaa 500 garaam, ama ujeedo in loo qaybiyo ilaa 30 garaam) ayaa lagu soo daadgureyn doonaa mar haddii xashiishaddu sharci ka tahay Illinois. Waxaan quseynaa sharciga qodobkaan waxaan ku siineynaa faahfaahinta.
Illaa 800,000 oo qof oo ku nool gobolka Illinois ayaa xaq u yeelan doona uumiga ee dambiyadoodii hore ee 'dambiyada yar yar ee xashiishadda' iyo dembiyo kale oo dhowr ah marka loo eego Qaybta 4 iyo 5 ee Sharciga Xakamaynta Cannabis ee Illinois.
Boggan, waxaan ku bixinnaa faahfaahin aad u fara badan oo ku saabsan waxa dambiyada xashiishadda loo adeegsan karo iyo sida taasi u saamayneyso maqaalkaaga codsade sinnaanta bulshada ee warshadaha cannabis cusub ee Illinois.
Sida loo ballaariyo dembiyada cannabis gudaha Illinois
Soo hel diiwaanadaada xiritaanka, oo mararka qaarkood loo yaqaan "xaashi xaashi", loogu talagalay qabashada xashiishadda ama xukumida & hubi haddii ay xaq u leeyihiin.
Haysashada ilaa 500 garaam, ama ujeedka loo qaybinayo ilaa 30 garaam ayaa u qalma uumiga sida ku xusan sharciga cannabis cusub ee Illinois.
Wac rugta gargaarka sharciga ee deegaankaaga oo aad fikrad ka hesho diiwaankaaga si aad u bilowdo nidaamka qulqulaya ee u baahan shaqo dheeraad ah.
"Dembiyada Xashiishadda Yar" ayaa si otomaatig ah loogu soo saari doonaa, laakiin taasi waa haysashada xashiishadda oo ah ilaa hal wiqiyad (30 garaam).
U gudbi codsi u bixida xafiiska xoghaynta wareegga.
Imaw dhegeysiga maxkamada hadii wax diidmo ah laga muujinayo dacwadaada xashiishadda Cannabis ee Gobolka waxaa xareeyay Gobolka
Maxkamaddu ha oggolaato codsigaaga si ay u faafiso xashiishkaaga cannabis ama loo xiro.
Boliiska maxalliga ah iyo booliiska gobolka waa in ay sii saaraan diiwaankaaga, kaas oo qaadan kara ku dhawaad ​​60 maalmood kadib amarka.
Waa kan isku xirka warbixintii Colorado oo muujineysa yareynta xariga & DUIs kadib sharciyeynta cannabis.
Fasaxida Xashiishadda iyo Sinnaanta Bulshada ee Illinois
Bannaanka Dabaqadda Tooska ah ee 'Cannabis Illinois' ee loogu talagalay Dembiyada Cannabis Yar-yar
(G-5) "Dembiyada Xashiishad Yar" micnaheedu waa xadgudub
ee Qaybta 4 ama 5 ee Sharciga Xakamaynta Cannabis
ku saabsan in aan ka badnayn 30 garaam wax walboo leh
ay ka kooban tahay xashiishad, hadduusan xadgudubkaasi sameynin
ku dar xoojinta ciqaabta sida ku xusan Qeybta 7 ee
Sharciga Xakamaynta Cannabis lamana xiriirinayo a
xiritaan, xukun ama xukun kale oo rabshad wata
danbi sida lagu qeexay qayb hoosaadka (c) Qaybta 3aad ee
Xuquuqda Dhibanayaasha Dembiga iyo Sharciga Markhaatiyaasha.
Qormada Kooban ee Faafinta Xashiishka ee Illinois
Codsadaha Sinnaanta Bulshada
20% ee natiijada dalabkaaga
Saddex arrimood oo codsadayaasha Sinnaanta Bulshada
Deganaanshaha “Aag Saamayn Ku Leh Dhibaatooyinka Wax yeeloobay”
Waxaa loo qabtay "dambi u qalma ka saarista"
10 shaqaale ah oo buuxa oo leh 51% tirada 1 ama 2
Dembiyada U Qalma in Lagu Sii Daayo Sida waafaqsan Sharciga Xashiishka
Dembiyada xashiishad yar
Mashiinka goos goos ah
Aan ka badnayn 30 garaam
Ma jirto xoojin rigoore
Ku xadgudubka qaybta 4 ama 5 ee Sharciga Xakamaynta Cannabis
Misdemeanor ama Fasalada 4aad Dembiyada culus
Sharciga Xakamaynta Cannabis - Nooca 4 Dambiga culus
Qaybta 4 - Lahaanshaha
Hoosaadka C - ilaa 100 garaam
Dambiga xiga - Nooca 4 Dambiga culus
Hoosaadka D - 101 illaa 500 garaam
Dembiga koowaad oo keliya - Fasalka 4 Dambiga culus
Dambiga xiga - Nooca 3 Dambiga culus
Qaybta 5 - soosaarista iyo ujeedka loo dhiibo
Hoosaadka C - 10 ilaa 30 garaam
Heerka 4 dambi
Xiritaanka Ulakaca ah
Qodobka anshaxeed ee Qeybta 135 ayaa markaa kadib la dabaqi doonaa
Haddii aad leedahay diiwaan dambi, ka dib waa inaad ku cayaartaa sharciyo kaladuwan si aad u muujiso in lagu dhaqanceliyay
Markaa haddii aad u qalanto inaad noqoto codsade sinaanta bulshada sababta oo ah inaad ula kac u sameysay, malaha si fiican uma shaqeyn doonaan.
Sawirro laga soo qaaday sharciga dib u eegistaada ku saabsan dhinacyada sinnaanta bulshada ee daadinta dembiyada xashiishadda.
Fasaxida Xiritaanka "Dembiyada Xashiishadda Yar" ee Illinois
Sidoo kale kuxirida dambiyada ama dambiyada hoos yimaada Sharciga Xakamaynta Cannabis ee Qaybta 4 iyo 5
Halkan waxaa laga helayaa sharciga ku saabsan dambiyada kale ee xashiishadda cannabis u qulqulaya Illinois.
Burburinta iyo Sinnaanta Bulshada ee Qoraalka Illinois
Haa, aniga Thomas Howard garyaqaan xashiishad Waxaad ka heli kartaa wershadaha cannabis Industry Lawyer.com ilo toos ah oo ku saabsan su'aalahaaga ku saabsan gelitaanka iyo ka shaqeynta warshadaha cannabis sharciga ah. Maanta, waxaan ku leenahay mawduuc kulul cannabis - sinnaanta bulshada. Illinois waxay si cad u dhaqan gelisay sinnaanta bulshada sharcigeeda waxayna abuurtay dambiyo u qalma uumibixinta oo u qalma dadka sida codsadayaasha sinnaanta bulshada.
Qeybta sinnaanta bulshada ee liisanka xashiishadda cannabis ayaa ka kooban 20% dhibcaha dalabkaaga waxaana jira 3 qaab oo aasaasi ah oo lagu helo. 1) ku nooshahay aag Saamayn ku yeeshay, 2) in la qabto ama lagu xukumo dambi u qalma uumiga sharciga cusub ee xashiishadda cannabis, ama 3) u shaqeyso shirkad cannabis ah oo ay ku jiraan ugu yaraan 10 shaqaale ah oo waqti buuxa shaqeeya lambarka 1 ama 2. Taasi waxay ahayd dhibcaha sinnaanta bulshada, iyo ma aha codsadeyaasha - maxaa yeelay markaa waxaad u baahan lahayd aqlabnimo lahaansho iyo xakameyn dhibcaha kow iyo laba.
Waxaan hadda diiradda saari doonnaa hadda dambiyada u qalma ka saarista. Waa maxay kuwaasi? Sharciga Cannabis iyo Sharciga Canshuuraha ("CRTA") wuxuu ku abuuraa iyaga oo qeexaya erey sharciyeed cusub oo farshaxan, "dambiga xashiishadda yar", iyo wax ka beddelka ficil xakameynta xashiishadda si ay uga mid ahaato lahaanshaha iyo ujeedka loo qaybinayo illaa iyo inta ay ahayd sharci darro ama fasal 4 dambi ah.
Waa maxay dembiga xashiishadda cannabis? CRTA waxay ku qeexday inay xadgudub ku tahay Qaybta 4 ama 5 ee Sharciga Xakamaynta Cannabis oo aan ka badnayn 30 garaam oo xashiishad, illaa iyo inta aysan ku jirin kordhinta ciqaabta iyadoo la raacayo Qeybta 7 ee fal xakameynta xashiishadda - aasaaska rabshadaha marka lagu daro ka ganacsiga ama xashiishadda cannabis.
Sharciga cusub wuxuu si otomaatig ah u tirtirayaa dhammaan dambiyada yaryar ee xashiishadda cannabis, taas oo sababi karta kala-goyn xagga awoodda maxaa yeelay taliyaha oo keliya ayaa leh awooda uu cafiyo dambiilayaasha - taas oo u maleyneysa inuu JB Pritzker sameyn doono maadaama uu yahay Biil uu taageeray oo saxiixay. - Malaha saxeexidda biilka waxay ahayd cafis - isagoo si sharci ah u hadlaya.
Jahawareerku wuxuu ku yimaadaa dambiyada kale ee la karaanka karo ee u baahan waraaqo dheeri ah, iyo aqoon-isweydaarsiyo saqafka ah sannadka 2020, si aad uga baxdid rikoorkaaga. CRTA waxay bixisay in kaliya dambiyada yar yar ee daroogada canbaaniyada loo eryin karo, laakiin sidoo kale dambiyada iyo dambiyada fasalka 4 ee ku xusan Qodobka 4 iyo 5 ee Sharciga Xakameynta Cannabis.
Qaybta 4aad ee Sharciga Xakameynta Cannabis wuxuu la macaamilaa lahaanshaha, waxaana lagugu qabsan karaa haysashada ilaa 500 garaam (taasi waa wax kayar hal rodol) xashiishadda aan shatiga lahayn - laakiin markale lagu qabsado waa dambi weyn, fasalka 3 dembiga dambiga xiga. Waxaa lagugu qabsan karaa 30 ilaa 100 garaam oo wakhti ku xiga oo aad noqoneyso Dambi Class 4 ah. Markaa haddii hal mar lagu qabto xashiishadda cannabis hal mar, waad uumi kartaa - si kastaba ha noqotee haddii taasi dhacday…
Waxaa suuragal ah in sidoo kale lagugu soo dacweeyay Qaybta 5aad ee Sharciga Xakamaynta Cannabis si aad ugu talagasho inaad u qaybiso, asal ahaan inaad ku talo jirto inaad iibiso xashiishadda. Haddii taas lagugu soo oogo, xaddiga xashiishadda cannabis aad ayey uga yar tahay. In lagu soo oogay damacsan inuu qaybiyo in ka badan 10 laakiin in ka yar 30 garaam oo xashiishad ah fasalka 4 waa dambi, in ka yar 10 garaam waa sharci darro. 30 garaam kaliya waa ounce, oo u badan tahay in ka yar $ 500 atkaaga agtaada ah, iyo sidoo kale xadka sharciga lahaanshaha ee sharciga CRTA. Waxaa laga yaabaa inaysan ahayn isku dhac in cadadka sharciga ah ee la haysto uu la mid yahay lacagta lagaa saari karo marka la isku dayo inaad dhiibto.
Wax ka badalkan ayaa runtii maskaxda ku haya 2 waxyaabood. Marka hore, in badan ayaa la soo qaban doonaa xashiishadda sababtoo ah heerka lahaanshaha sharci ee hal wiqiyadood ayaa si fudud loo dhaafi karaa, ama dadku waxay bilaabaan inay bixiyaan lacagtooda baararka cannabis oo waxaa lagu qabtaa inay miisaamaan hal garaam oo ay xiraan. xadgudubyada yar yar ayaa dhamaantood xaq u leh in laga takhaluso, tan labaadna, natiijada sii socoshada qabqabashadu waxay noqon doontaa in mawjadaha codsadayaasha sinnaanta bulshada ay koraan - gaar ahaan haddii dadku ay abaabulaan munaasabadaha xuquuqda cannabis ee bulshooyinka kala duwan ee bilaabay gudbiya xeerarka mamnuucaya ganacsiga cannabis ganacsigooda. Jaaliyadaha - Maaha wax aad u wanaagsan saaxiibtinimada in la xidho dadka markay sameeyaan wax ka amaan ah oo ka caafimaad badan khamriga ama sigaarka - ama xitaa cuntada soonka. Laakiin qabqabashadan si deg deg ah ayey u dhici doonaan sidii ay horay uga sameeyeen Colorado sharci-darro ka dib.
Waxay hoos ugu dhacday si fiican sidoo kale, fiiri ma aha oo keliya qabashada marijuana ee Colorado, laakiin sidoo kale waxa ku faraxsan sida loo xiray DUI - waxay sidoo kale ku dhaceen laba lambar. Wixii intaa ka badan, waxaan ka tagay warbixintii rasmiga ahayd ee ka timid Colorado qaybta sharaxaadda iyo sidoo kale waxaan ku xidhmay websaydhkan.
Haddii aad dhibbane u tahay mid ka mid ah dambiyadanas lama-taabtaanka ah oo aad rabto inaad gasho warshadaha cannabis - xor u tahay inaad baarto websaydhkayga ama taleefoon ii soo dirto.